Baarlamaanka Federaalka ah oo maanta u ballansan akhrinta Mooshinka ka dhanka ah Xukuumadda - iftineducation.com
Baarlamaanka Federaalka ah oo maanta u ballansan akhrinta Mooshinka ka dhanka ah Xukuumadda
iftineducation.com – Gudoonka Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya ayaa la filaaya saaka in ay si rasmi ah Xildhibaanada ugu qeybiyaan mooshinka ka dhanka Ra’iisul Wasaare Cabdiweli Sheikh Axmed Maxamed iyadoo ay ka yeelan doonaan dood.
Fadhiga maanta ee Xildhibaanada ayaa lagu wadaa in uu ka duwanaan doono kuwii hore ee fawdada iyo fashilka ku dhamaadey, kadib markii labada garab ay ballan qaadeen in ay ilaaliyaan xasiloonida Baarlamaanka.
Xildhibaanada kasoo horjeeda mooshinka ayaa weli ku adkeysanaya in mooshinka uu yahay mid sharci darro ah, balse ay ogolaadeen in laga doodo.
Maalinta sabtida soo socota oo ku beegan 6-da bisha ayaa la filaaya in mooshinka cod loo qaado.
Mooshinkan ayaa si weyn u kala qaybiyey laamaha Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxaana uu gaarey heer shaqo kasta oo socotey ay istaagto, waxaana guul daraystey waan-waankasta oo lagu xalinaayo khilaafkan, markii Madaxweynuhu soo istaagey Raysalwasaaraha kalsooni kuma qabo lamana shaqeyn karo.
Booliska iyo Nabadsugida oo lagu wareejiyay xerada Maslax: Sawirro